Local – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
မြန်မာလူမျိုးတို့ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်းမှာ အစားအသောက်ဆင်ခြင်မှု အားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာလူမျိုးတို့ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း များပြားလာရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုသည် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဂရုစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဦးကိုကိုက ပြောကြားသည်။ “ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းမြင့်မားလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေ (Non-Communicable Diseases) အဖြစ်များစေတဲ့...
ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပြီးသူများ ပြန်လည်မဖြစ်ပွားရန် ကာကွယ်နည်းများ မျှဝေ ပြောကြား
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ ရင်သားကင်ဆာဆွေးနွေးပွဲကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း အသိပညာပေးအစီ အစဉ်တစ်ရပ်ကို ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းက ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီး ပြန်လည် မဖြစ်ပွားနိုင်ရန်...
နို့မှုန့်တိုက်သည့် ကလေးသေဆုံးနှုန်းမှာ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာတိုက်သည့် ကလေးသေဆုံးနှုန်းထက် ၆ဆမှ ၁၄ဆအထိ ပိုနေကြောင်းသိရ
၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ နို့မှုန့်တိုက်သည့်ကလေးသေဆုံးနှုန်းမှာ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာတိုက်သည့် ကလေးသေဆုံးနှုန်းထက် ၆ဆမှ ၁၄ဆအထိပိုနေကြောင်း သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ တွေ့ရှိရသည်ဟု LEARN စီမံချက်မှ အာဟာရဆိုင်ရာအကြံပေး ဦးစောဒင်အောင်၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ မွေးကင်းစမှ အသက်ခြောက်လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ၅နှစ်အောက် ကလေးသေဆုံးမှုကို ၁၃ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ချနိုင်ကြောင်း၊...
မွေးစမှ ၆လအောက် ကလေးများအား မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း မြင့်တက်လာသော်လည်း မီးဖွားပြီး တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း ကျဆင်းလာ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မွေးစမှ ၆လအောက် ကလေးများအား မိခင် နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း မြင့်တက်လာသော်လည်း မီးဖွားပြီး တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း ကျဆင်းလာကြောင်း ၂၇-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့၊ ဟိုတယ်မန္တလေးတွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိခင်နို့စနစ်တကျ တိုက်ကျွေးခြင်း လုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေးအခမ်းအနားမှသိရသည်။...
ဆိုးဆေးအရောင်မပါတဲ့ သဘာဝအရောင်မျှစ်တွေကို ၀ယ်ယူအားပေးစေချင်ပါတယ်
ဒေါက်တာဦးကျော်ကျော် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး) မေး. ဈေးကွက်ထဲက ဆိုးဆေးပါတဲ့ မျှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောင်းချသူတွေကို ဘယ်လိုပညာပေးတာ၊ အရေးယူတာတွေ လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဈေးချိုအပါအ၀င် မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ ဈေးတွေအတော်များများကို ခွင့်မပြုဓာတုဆိုးဆေးကင်းစင်တဲ့ဈေးများ ပေါ်ထွက်လာရေးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မန္တလေးအနေအထားနဲ့ပြောရရင် အရင်က ငပိက ကောင်းသွားပေမယ့် အခု...
ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆိုင်ရာ သုံးနှစ်တာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သင်တန်းကို SingHealth နှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သုံးနှစ်တာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်လိုက်ကြောင်း ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမှ ပြန်လည်ထူထောင် နိုင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ Singapore Intern-ational Foundation (SIF)၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့်...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးများ မျက်စိမှုန်ခြင်းကို မျက်မှန်မတပ်ပါက နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ပျင်းတွဲမျက်စိ (Lazy Eye) ဖြစ်နိုင်သဖြင့် အထူးအလေးထား ဂရုစိုက်ပေးသင့်ကြောင်း ရန်ကုန်၊ မျက်စိဆေးရုံကြီး၏ ပါမောက္ခ ဋ္ဌာနမှူးဖြစ်သူ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။ “ကလေးတွေမှာ မွေးစကနေ နှစ်နှစ်အရွယ်နဲ့ နှစ်နှစ်ကနေ...
‘မွေးစကနေ ၆လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်တာက ဘယ်လောက်အထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သလဲဆိုတာ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးက သက်သေပါပဲ’ဟု ချစ်သုဝေပြောကြား
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိခင်များနှင့်အတူ ထင်ရှားသည့် အနုပညာရှင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများက ကလေးမွေးပြီး ပထမ၆လ အထိ မိခင်နို့ချိုတစ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ကျွေး သင့်ကြောင်း သတင်းစကားဖြန့်ဝေခြင်းကို ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှိ ရန်...
BPI မှ ဆေးဝါးအသစ် ၆မျိုး မိတ်ဆက်
၊မေ၊ BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှ ဆေးဝါးအသစ် ၆မျိုးနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်တို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဆေးများကို ယခုနှစ်အတွင်း ဖြန့်ဖြူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်းစိန် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှ စက်ရုံမှူး ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထံမှ သိသည်။ ကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် ကုသသည့် ဆေး၊ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး၊ HIVနှင့်...
ငါးနှစ်အောက်မြန်မာကလေး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနေပြီး ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လုံလောက်သော အရပ်မရှိကြောင်း သိရ
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၅-၁၆ (Myanmar Demographic and Health Survey)အရ ငါးနှစ်အောက်မြန်မာကလေး ၁၉ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနေ ပြီး ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လုံလောက်သော အရပ်မရှိသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှိ ရန်ကုန်ပန်းချီပြခန်းတွင်ပြုလုပ်သော...